သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ22010 Darüşşafakaဘူတာရုံ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeအထွေထွေသမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ22010 Darüşşafakaဘူတာရုံ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ22010 Darüşşafakaဘူတာရုံ
02 / 09 / 2019 Levent Elmastaş အထွေထွေ, တူရကီ, ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 0
လိုင်းများ၏ Constanta-Çernova (Bogazköy) s ကိုအမှန်တကယ်စာချုပ်-လက်မှတ်ရေးထိုးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအပြီးသတ်ခဲ့သည်အတွင်းပထမဆုံးမီးရထားလမ်းအတွက်2စက်တင်ဘာလ 1857 Rumelia ။
2 စက်တင်ဘာလ 1908-ကျောင်းတိုက် Thessaloniki ရထားလမ်းလုပ်သားများတိုးတက်လာသောလုပ်ခလစာနှင့်အချိန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအဘို့အသပိတ်ပေါ်သွား၏။4စက်တင်ဘာလ 1908 အလုပ်သမားများ၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖန်ဆင်းတော်တောင်းဆိုမှုများ၏အလုပ်လက်ခံခဲ့သည်။
2 စက်တင်ဘာလ 1925 လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးKütahyaKütahyaနှင့်Balıkesirစတင်ခဲ့သည်။ Kütahya-Demirciören (13 ကီလိုမီတာ) ရပ်တန့်ရန်တူရကီကန်ထရိုက်တာများကပြုလေ၏။
2 စက်တင်ဘာလ 1929 Kütahya-line အမိန့်ကိုဖွင့်။
2 စက်တင်ဘာလ 1933 Ulukışla-Kayseri လိုင်း (172 ကီလိုမီတာ) လည်ပတ်မာ့ဂဒန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုင်း 16.200.000 ပေါင်စုစုပေါင်းကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 1066 669 ကီလိုမီတာခုနှစ်တွင်တူရကီ-Adana ကနေကီလိုမီတာဆင်းသက်ခဲ့သည်။
2 စက်တင်ဘာလ 1940 Bismil ပထမဦးဆုံးမီးရထားဘူတာရုံဝင်ကြ၏။
2 စက်တင်ဘာလ 1945 Uzunköprü-Karagac မီးရထားလမ်းဂရိနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။
2 စက်တင်ဘာလ 2010 Darüşşafakaဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ22010 Darüşşafakaဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံ ... 02 / 09 / 2017 ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလ21857 Rumelia အတွက်လိုင်းများ၏ Constanta-Çernova (Bogazköy) s ကိုအမှန်တကယ်စာချုပ်-လက်မှတ်ရေးထိုးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအပြီးသတ်ခဲ့သည်အတွင်းပထမဆုံးမီးရထားလမ်းဖြစ်သည်။2စက်တင်ဘာလ 1908-ကျောင်းတိုက် Thessaloniki ရထားလမ်းလုပ်သားများတိုးတက်လာသောလုပ်ခလစာနှင့်အချိန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအဘို့အသပိတ်ပေါ်သွား၏။4စက်တင်ဘာလ 1908 အလုပ်သမားများ၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖန်ဆင်းတော်တောင်းဆိုမှုများ၏အလုပ်လက်ခံခဲ့သည်။2စက်တင်ဘာလ 1925 လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးKütahyaKütahyaနှင့်Balıkesirစတင်ခဲ့သည်။ Kütahya-Demirciören (13 ကီလိုမီတာ) ရပ်တန့်ရန်တူရကီကန်ထရိုက်တာများကပြုလေ၏။2စက်တင်ဘာလ 1925 လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးKütahyaKütahyaနှင့်Balıkesirစတင်ခဲ့သည်။ Kütahya-Demirciören (13 ကီလိုမီတာ) ရပ်တန့်ရန်တူရကီကန်ထရိုက်တာများကပြုလေ၏။2စက်တင်ဘာလ 1929 Kütahya-line အမိန့်ကိုဖွင့်။2စက်တင်ဘာလ 1933 Ulukışla-Kayseri လိုင်း ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ22010 Darüşşafakaဘူတာရုံ 02 / 09 / 2018 ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလ21857 Rumelia အတွက်လိုင်းများ၏ Constanta-Çernova (Bogazköy) s ကိုအမှန်တကယ်စာချုပ်-လက်မှတ်ရေးထိုးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအပြီးသတ်ခဲ့သည်အတွင်းပထမဆုံးမီးရထားလမ်းဖြစ်သည်။2စက်တင်ဘာလ 1908-ကျောင်းတိုက် Thessaloniki ရထားလမ်းလုပ်သားများတိုးတက်လာသောလုပ်ခလစာနှင့်အချိန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအဘို့အသပိတ်ပေါ်သွား၏။4စက်တင်ဘာလ 1908 အလုပ်သမားများ၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖန်ဆင်းတော်တောင်းဆိုမှုများ၏အလုပ်လက်ခံခဲ့သည်။2စက်တင်ဘာလ 1925 လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးKütahyaKütahyaနှင့်Balıkesirစတင်ခဲ့သည်။ Kütahya-Demirciören (13 ကီလိုမီတာ) ရပ်တန့်ရန်တူရကီကန်ထရိုက်တာများကပြုလေ၏။2စက်တင်ဘာလ 1925 လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးKütahyaKütahyaနှင့်Balıkesirစတင်ခဲ့သည်။ Kütahya-Demirciören (13 ကီလိုမီတာ) ရပ်တန့်ရန်တူရကီကန်ထရိုက်တာများကပြုလေ၏။2စက်တင်ဘာလ 1929 Kütahya-line အမိန့်ကိုဖွင့်။2စက်တင်ဘာလ 1933 Ulukışla-Kayseri လိုင်း ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: နိုဝင်ဘာလ 11 2010 Seyrantepe ဘူတာရုံ ... 11 / 11 / 2017 ယနေ့တွင်သမိုင်းနိုဝင်ဘာလအတွက်ပြည်နယ်မီးရထား၏ 11 1961 ပထမဆုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်Behiç Erkin 84 နှစ်ပေါင်းအနိစ္စရောက်လေ၏။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စဉ်အတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်ကနေတူရကီမှန်ထမ်းဗိုလ်မှူးကြီးBehiçရုန်းကန် (Ergun) Bey ပထမဦးဆုံးပြည်နယ်မီးရထားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Behiç Bey, ပဋိညာဉ် Izmir, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်လိုင်းEskişehirဘူတာရုံ၏မြစ်ဆုံမှာတူရကီတြိဂံမြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏အမှုဆောင် 1921-26 နှစ်ပေါင်း။ TCDD သင်္ချိုင်းတွင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 11 2010 Seyrantepe ဘူတာအစေခံရန်စတင်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 2010 CPC Marmaray Sirkeci ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ 03 / 10 / 2012 အမြစ် 2004 နှင့်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ထားကြ၏ Marmaray, က Bosphorus ၏ဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဖက်အောက်မှာစည်းလုံးညီညွတ်မည်ဟုခရီးသည်ရထားလမ်းတိုးတက်မှုစီမံကိန်းကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်။ Marmaray အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား, Eurotunnel နဲ့တူနေတဲ့ရထားလမ်းစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ Halkalı ဒါဟာ Gebze အတွက်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်မှလင့်များရှိပါတယ်။ 1 လူဦးရေသန်းစွမ်းအင်နှင့်အချိန်ငွေစုစက်တပ်ယာဉ်များအသုံးပြုမှုအတွက်လေထုအရည်အသွေးနှင့်လျှော့ချရေးပေါ်စီမံချက်သည်အလွန်အကျိုးရှိမည်ဖြစ်စေမည်ဟုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်ကိုအတိုကောက်ပါလိမ့်မယ်။ Bosphorus တံတားနှင့် FSM တံတားကိုလည်းပမာဏကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးကြောင့် Marmaray လိုင်း 1,4 ကီလိုမီတာမှပြီးစီးခဲ့သောအခါ။ (Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း) နှင့် 12,2 ကီလိုမီတာ။ (ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဘှားမွငျ) CPC ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: နိုဝင်ဘာလ 28 2010 Haydarpasa ရထားဘူတာခေါင်မိုးများနှင့်မီးပေါ်မှာအချိန်တိုအတွင်းငွိမျးခဲ့သည် 28 / 11 / 2012 ယနေ့တွင်နာဖီးသူတို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြသည်အမျိုးမျိုးသောတရားတွေ့ဘို့မော်ဒယ်များအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖို့အစိုးရအနေဖြင့်တစ်ဦးတောင်းဆိုချက်ကိုအင်ပါယာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်သမိုင်းနိုဝင်ဘာလ 28 1882 အတွက်il¬gil။ စူလတန်ကဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသည်စာချွန်လွှာ "မီးရထား Bi't-saving နှင့် VESA Channel ကိုများနှင့်ဆိပ်ကမ်းဆောက်လုပ်ရေးနာဖီးက" နေကြပညတ်တရား၏နိယာမမှ၌ဤရက်စွဲကိုအပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ 28 1907 Konya ရိုးရိုးဆည်မြောင်းဝန်ကြီးလိုက်လျောသည့် Anatolian မီးရထားကုမ္ပဏီမှပေးထားခဲ့သည်။ မစ္စတာအိုင်ရဲ့ရေမြို့ကြီးများ 200 ကီလိုမီတာအရသိရသည်။ ဆည်မြောင်းချန်နယ်ဒေသမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏မည်ဖြစ်ကြောင်းelve¬rişl။ ထို့ကြောင့်ပြည်မှ 53.000 ဟက်တာဆညျစိုက်ပျိုးရေးမှဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားတစ်လမ်း xnumx't သဘောတူညီချက်¬သေနတ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 1913 28 Kütahya, ပတ်သက်. ဒိုင်လူကြီးနှင့်အတူတစ်အငြင်းပွားမှုအတွက်စေ့စပ် Julius Berger အုပ်စုတစ်စုinşaatı¬nBalıkesirရထားလမ်း ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ22010 Darüşşafakaဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: နိုဝင်ဘာလ 11 2010 Seyrantepe ဘူတာရုံ ...
စက်တင်ဘာလ 2010 CPC Marmaray Sirkeci ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: နိုဝင်ဘာလ 28 2010 Haydarpasa ရထားဘူတာခေါင်မိုးများနှင့်မီးပေါ်မှာအချိန်တိုအတွင်းငွိမျးခဲ့သည်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အ Haydarpasa ရထားဘူတာ၏ခေါင်မိုးအတွက်နိုဝင်ဘာလ 28 2010 မီး ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: နိုဝင်ဘာလ 28 2010 Haydarpasa မီးရထားဘူတာ ...
နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန် စတင်. စက်တင်ဘာလ72011 အရှေ့တိုင်း Express ကို: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ72011 အချိန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစက်တင်ဘာလထဲမှာစတင်သော Orient Express ကို ...